Sawirro: Garoonka diyaaradaha Aadan Cadde oo la ballaarinayo | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Sawirro: Garoonka diyaaradaha Aadan Cadde oo la ballaarinayo
Sawirro: Garoonka diyaaradaha Aadan Cadde oo la ballaarinayo
Sii hayaha Ra’iisul Wasaaraha dalka, mudane Mahdi Maxamed Guuleed, ayaa maanta kormeer howleed ku tagay gegida diyaaraha ee Aadan Cabdulle, isagoo u kuur galayay howlaha baaxadda leh ee ballaarinta iyo horumarinta garoonka.
Mudane Mahdi oo uu wehliyo sii hayaha Wasiirka Gaadiidka Cirka mudane Maxamed Cabdullaahi Oomaar, saraakiisha garoonka iyo mas’uuliyiinta shirkadda Favori ee garoonka maamusha ayaa booqday qeybaha kala duwan ee garoonka, waxa uuna mas’uuliyiinta ka dhageystay warbixin ku saabsan mashaariicda horumarinta garoonka.
Sii hayaha Wasiirka Gaadiidka Cirka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Oomaar ayaa sheegay in ay socdaan howlo baaxad leh oo lagu ballaarinayo garoonka.
Sii hayaha Ra’iisul Wasaaraha Mudane Mahdi Maxamed Guuleed, ayaa ku ammaanay mas’uuliyiinta iyo howl wadeennada garoonka shaqada wanaagsan ee ay hayaan, waxuuna ku boorriyay in ay sii dardar geliyaan.
Maqaal horeSawirro: Muxuu Deni kala hadlay guddoonka Aqalka Sare?
Maqaal XigaMadaxweyne ku xigeenka Puntland oo la kulmay wafdi WFP ka socda